Nzọụkwụ 6 iji nweta Platform Data Customer (CDP) Zụrụ -lọ Gị C-Suite | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 10, 2020 Wednesday, November 11, 2020 Tom Treanor
Ọ ga-adị mfe iche na n'oge a na-ejighị n'aka nke egwu, CxOs adịghị njikere itinye nnukwu ego na azụmaahịa data na arụmọrụ nke ụlọ ọrụ. Ma ihe ijuanya bụ na ha ka nwere mmasị, ma ọ nwere ike bụrụ n'ihi na ha na-atụ anya mbibi, mana atụmanya nke ụgwọ ọrụ nke ịghọta ebumnuche na omume ndị ahịa dị oke mkpa ileghara anya. Fọdụ na-emewanye atụmatụ ha maka mgbanwe dijitalụ, yana data ndị ahịa bụ akụkụ bụ isi nke ụzọ ha.
Kedu ihe kpatara ụlọ ọrụ ji ka na etinye ego na mgbanwe mgbanwe dijitalụ?
Dịka ọmụmaatụ, CFOs, enweburu nchekwube banyere akụ na ụba 2020 nke ọma tupu Covid-19. N'ime oge na-adịbeghị anya Nyocha CFO Global Business Outlook, na 2019, ihe karịrị 50 pasent nke CFO kwenyere na US ga-enwe nlaazu tupu njedebe nke 2020. Mana n'agbanyeghị enweghị nchekwube, ndị CDP ka gosipụtara mmụba ndekọ na 2019. Ma eleghị anya, ọtụtụ ndị isi nchịkwa na-aga n'ihu itinye ego na data ndị ahịa n'ihi ọ dịtụbeghị ngwa ngwa ịghọta ihe ndị ahịa ha ga-achọ, mee, na ịzụta ọzọ ka ọnọdụ na-agbanwe kwa izu kwa izu n'oge ọrịa na-aga n'ihu.
Na agbanyeghị igwe ojii akụ na ụba na-agbakọta ugbu a na njedebe nke 2019, ndị isi ụlọ ọrụ anaghị elekwasị anya na-akwụ ụgwọ. Kama nke ahụ, ha nwere mmasị iji nlezianya na-aga n'ihu ma melite uru. A Nyocha 2019 Gartner achọpụta na ndị isi nwere mmasị na iguzogide usoro ahịa dị ala site na ịchọta ohere ọhụụ maka uto na njikwa njikwa ka mma.
Nweta? Oge ndị a na-ejighị n'aka taa na-eme ka mgbanwe dijitalụ bụrụ ihe mgbaru ọsọ ngwa ngwa. Nke ahụ bụ n'ihi na CDP nwere ike iji nchịkọta data yana igwe na-amụrụ ihe akụrụngwa iji melite uru gafere otu nzukọ.
Kwụpụ 1: Kpoo CDP Jiri Ikpe
Ọ dị mkpa ịghọta ikpe ahụ maka data ndị ahịa na ndị CDP. Ọ bụrụ na ị bụ onye uwe C – ma ọ bụ ọ bụrụ na gị na otu rụọ ọrụ nke ọma – ị nwere ike ịrụ ọrụ na-akọwapụta uru nke ojiji a kapịrị ọnụ maka data ndị ahịa: ịme njem njem ndị ahịa na-ere ahịa, ịchụso nke ọma na nkewa, amụma ngwa ngwa na mmetụta nke omume ndị ahịa na ịzụta, ma ọ bụ ọbụna nhazi ngwa ngwa nke ngwaahịa, ọrụ, na ụdị ọhụụ ma ọ bụ nke ka mma. Dabere na Farland Group, Ndị isi ụlọ ọrụ C-dị iche na ndị ọzọ kiriri ya. Ha na-achọ iji ngwa ngwa banye n'okwu ahụ, na-etinye aka na nsonaazụ nke ọrụ, ma na-atụle usoro, ọ bụghị usoro. Tọọ ọnọdụ gị ka ị nwee ihe ịga nke ọma site na ịkpụpụta ya na nchịkọta mkpirisi dị nkenke.
Lekwasị anya na nsogbu ụfọdụ: Wantchọrọ inwe ike ịme nkwupụta dịka nke a: “N’ime ụzọ ụzọ atọ gara aga, ire ahịa belatara. Anyị chọrọ ịgbanwe omume a site na ịba ụba ahịa ọ bụla maka ndị ahịa na ịzụta oge. Anyị nwere ike iru ihe mgbaru ọsọ a site na iji usoro ịzụ ahịa azụmaahịa data na Kupọns ahaziri iche. ”
Chọpụta ihe kpatara ya: “Ugbu a, anyị enweghị ngwaọrụ iji gbanwee data gaa na nkeonwe. Ọ bụ ezie na anyị na-anakọta ọtụtụ data ndị ahịa, a na-echekwa ya n'ọtụtụ dị iche iche (ire ahịa, usoro iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa, weebụsaịtị, ụlọ ahịa mpaghara Wi-Fi data). ”
Kpoo ihe na-esote: "Ọ bụrụ na anyị aghọtaghị otu omume ndị ahịa si agbanwe, anyị ga-atụfu ahịa na òkè ahịa na ndị asọmpi nwere ike imeju ọchịchọ ọhụrụ, na ọwa dị iche iche, karịa ka anyị nwere ike."
Dezie ihe ngwọta: “Anyị kwesịrị itinye a Platform nke Ndị Ahịa iji jikọọ data ndị ahịa. Iji CDP, anyị na-arụpụta na nkezi ahịa kwa ahịa ga-amụba site 155 percent na zuo ugboro ga-amụba site 40 percent.
Okwu ahia onye obula bu ihe puru iche. Ihe dị mkpa bụ ịchọpụta ihe ịma aka na njikwa data ndị ahịa, otu ha si emetụta ikike gị iji nweta nghọta ndị ahịa, yana ihe kpatara nghọta ndị ahụ ji dị mkpa. Nwekwara ike ịchọpụta ihe kpatara nsogbu ndị a na ihe kpatara ụzọ ndị gara aga enweghị ike idozi ha. Nke kachasị mkpa, mepụta echiche nke ịdị ngwa na usoro metrik ego nke gosipụtara etu esemokwu ndị a si emetụta nsonaazụ azụmaahịa.
Nzọụkwụ 2: Zaa ajụjụ a: "Gịnị kpatara CDP?"
-Ihe ọzọ ị ga-eme bụ iche echiche n’oge tupu ị rụọ ihe omume ụlọ akwụkwọ e nyere gị rụọ n’ụlọ. O nwere ike ịbụ na ị nwere ọtụtụ ajụjụ, dị ka: "Gịnị bụ CDP?" na “Kedu ka CDP si dị iche na CRM na a DMP? ” Ugbu a bụ oge iji ihe ọmụma gị site na ịkwadebe nkọwa ole na ole, nkọwa dị elu.
Emechaa, kọwaa otu ụlọ ọrụ CDP ga-edozi okwu ikpe gị n'ụzọ kacha mma, mezue ebumnuche dị mkpa, na nyere ndị ahịa gị aka inweta nsonaazụ kacha mma. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ebumnuche nke ngalaba gị bụ iji melite arụmọrụ mgbasa ozi site n'oge ozi nkeonwe nke ndi ahia, gosiputa ya a CDP nwere ike ijikọ data ndị ahịa iji mepụta ụdị ndị ahịa dị iche iche dị iche iche ma wepụta ndepụta aha iche iche. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị bụ melite iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa, kwuo maka otu CDP nwere ike isi jikọta data clickstream site na ngwa mkpanaka ma sonyere ya na weebụ dị adị, ire ahịa, na data ndị ahịa ndị ọzọ iji mepụta ahụmịhe ndị ahịa ka mma.
Kwụ na 3kwụ XNUMX: Nweta Ọhụụ Nnukwu Ihe Foto You Chọrọ
Ndị ndu C-ọkwa maara na ọ dị mkpa ịnwe ọhụụ maka nnukwu foto ahụ mgbe ị na-agbanwe nnukwu mgbanwe na atụmatụ ha ma ọ bụ arụmọrụ ha. na ndị isi C-larịị nwere ike ịgbakọta n'azụ. Yabụ, ebumnuche gị ọzọ ga-abụ igosi ha otu CDP ga-esi nyere nzukọ gị aka inweta ọtụtụ usoro atumatu akwadoro, na-ewepụta ọhụụ banyere otu CDP si enyere aka n'ịmepụta arụmọrụ zuru oke na-arụ ọrụ data.
Iji mee ka isi okwu gị pụta, ọ bara uru ịkpọtụ otu CDP nwere ike isi mee ka mmekọrịta dị n'etiti ndị isi ụlọ ọrụ C ndị ọzọ. A na-elegharakarị uru CDP anya bụ na ọ na-ebelata mkpa maka nkwado IT site na ịmepụta arụmọrụ dị n'etiti ahịa na ndị otu IT. Ndị a bụ ụzọ ole na ole CMOs na CIOs abụọ meriri CDP:
Nchịkọta / njikwa data emelitere. Ndị CDP weghaara ọrụ siri ike nke ịnakọta, nyocha, na ijikwa data ndị ahịa maka ngalaba ahịa na IT.
Akpaka ịdị n'otu nke ndị ahịa echiche. Ndị CDP na-ewepụ ihe dị elu na ntanetị nke njirimara ndị ahịa, nke na-ebelata ma ọrụ data na ndozi.
Nwekwuo ikike ịzụ ahịa. Ndị CDP na-enye usoro zuru oke nke ngwa ọrụ onwe ha maka ndị na-ere ahịa, na-ewepụ mkpa maka IT iji wepụta akụkọ na-ewe oge.
B2B ahia ikpo okwu Kapost bụ ezigbo ihe atụ ụwa etu esi arụ ọrụ a. Iji hazie ma mezie ọrụ ya, Kapost dabere na ọtụtụ ngwa SaaS dị n'ime, dịka Mixpanel, Salesforce, na Marketo. Agbanyeghị, iwepụta na ịbawanye data dị na ngwaọrụ ndị a bụ ihe ịma aka mgbe niile. Iwulite metrik arụmọrụ ọhụrụ chọrọ obere ndị agha nke injinia ngwanrọ. Ọzọkwa, nchekwa data dị n'ime ụlọ nke e mere na nchịkọta data enweghị ike ijide ọnụ ọgụgụ achọrọ ma chọọ nlekọta mgbe niile site na ndị otu IT.
Iji tụgharịa uche na usoro ndị a, Kapost jiri CDP mee ka data ya dị n'etiti ọtụtụ ọdụ data na ngwaọrụ SaaS. Naanị ụbọchị 30, Kapost nwere ike inye ndị otu ya ohere ịnweta data ya niile nke mbụ. Taa, DevOps nwere usoro nke ingest data ngwaahịa dị nro, ebe ọrụ azụmaahịa na-achịkwa mgbagha azụmahịa na-anya KPI. CDP ahapụla ndị otu azụmaahịa azụmaahịa Kapost site na ịdabere na injinia wee nye akụrụngwa nchịkọta dị ike.
Nzọụkwụ 4: Jiri ndabere na ihe osise kwado ndabere ozi gị
Echiche echiche ire isi dị ukwuu. Karịsịa, agbanyeghị, ịchọrọ azịza nye ajụjụ a “Gịnị mezie?”Onye ọ bụla na-arụ ọrụ n’ọkwa C chọrọ ịmara:“ Gịnị bụ mmetụta dị n’ala ala anyị? ” Lucille Mayer, onye isi ọrụ ihe ọmụma na BNY Mellon na New York, gwara Forbes:
Isi ihe ga-eme ka a kwanyere gị ùgwù [ya na ụlọ ọrụ C] bụ iji ike kwuo okwu banyere isiokwu gị. Ihe data siri ike na metrik karịa eziokwu qualitative nweta ntụkwasị obi. ”
Lucille Mayer, Onye isi nchịkwa ozi na BNY Mellon na New York
Ego ha ga-enweta, mmefu, na uto na-aghọ uru ha bara uru — ma ọ bụ na ọ bụghị. Yabụ kwuo banyere oke uru, na-atụle ọnọdụ ego taa na ọnọdụ ga-eme n'ọdịnihu. Nke a bụ ebe ị ga-abanye nkọwa gbasara isi ego data dịka ROI na ọnụego niile ị nwere. Fọdụ nwere ike ikwu okwu:
A na-eme atụmatụ ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa nke CDP $ X. Nke a gụnyere ndị ọrụ ọrụ na sistemụ na-efu na $ X.
ROI maka ngalaba ahia ga-abụ $ X. Anyị nwetara nọmba a site na ịtụ anya [30% mụbara na-echekwa na ụlọ ahịa, 15% mụbara mgbasa mkpọsa, wdg.]
A ga-enwe $ X na arụmọrụ na nchekwa maka [ngalaba IT, ahịa, arụmọrụ, wdg.].
Brandsfọdụ ụdị ndị ọzọ na-eji CDP achọpụtala nnukwu nsonaazụ. Lee ihe atụ ole na ole:
Onye na-arụpụta ụgbọala Subaru jikọtara data ndị ahịa gbasasịa n'ofe ahịa iji bulie ahia ROI. Nsonaazụ:
350% mmụba na mgbasa ozi CTR
15% mmụba na ọnụego iji site na otu "nkwụghachi azụ" mkpọsa maka $ 26M na ahịa net
Companylọ ọrụ ntecha Shisedo gbakọtara data ndị ahịa iji ohere ndị dapụtaranụ na mmemme iguzosi ike n'ihe ha. Nsonaazụ:
Onu ogugu 20% na-enweta ego n'ime ụlọ ahịa site na onye otu na-eguzosi ike n'ihe mgbe otu afọ gasịrị
Mmụba nke 11% na ego ha nwetara
5kwụ na posekwụ XNUMX: Wepụta Ngwọta Gị
Ugbu a ọ bụ oge inye nyocha ebumnuche nke azịza ga-enyere gị ezigbo ọhụụ. Malite site na depụta usoro mkpebi gị na nke onye na-ere CDP na-enyefe uru kachasị. N'ebe a, isi ihe bụ itinye uche na atụmatụ. Ke ibuotikọ emi na-ekwurịta okwu na C-suite, Roanne Neuwirth na-ede, sị: “Ndị isi na-ahụ maka otu ha nwere ike isi dozie nsogbu azụmahịa ma bulie ego na uru. Ha enweghị mmasị na… teknụzụ na ngwaahịa — ha bụ nanị ụzọ e si arụ ọrụ ma nye ha ndị ọzọ ka ha tụlee ma zụrụ. ” Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkọwa atụmatụ CDP, gbaa mbọ jikọta ha na nsonaazụ ndị eburu n'uche. N'etiti ihe kacha elu CDP chọrọ maka CMOs:
Nkewa ndị ahịa. Mepụta ngalaba ndị na-agbanwe agbanwe bụ ndị dabere na omume ndị ahịa, yana data ndị ahịa echekwara.
Mwekota nke data na-adịghị n'ịntanetị na n'ịntanetị. Jikọta ọnụ ahịa ndị na-adịghị ahụkebe ndị ahịa n'otu profaịlụ akọwapụtara na njirimara ndị ahịa pụrụ iche.
Nnukwu akụkọ na nyocha. Gbaa mbọ hụ na onye ọ bụla nwere ike ịnweta mmelite na ozi ọmụma ha chọrọ iji rụọ ọrụ ha n'otu ntabi anya.
Nzọụkwụ 6: Depụta Nzọụkwụ Ndị Ọzọ, Kọwaa KPI, ma Kwadebe Azịza Maka Ajụjụ Ndị Na-esochi
Ná ngwụsị nke ọkwa gị, nye ụfọdụ atụmanya doro anya maka mgbe ndị isi ọrụ ga-atụ anya ịhụ uru site na ntinye CDP. Ọ na-enye aka ịnye atụmatụ mpịakọta ọkwa dị elu yana usoro ihe osise gosipụtara isi ihe dị mkpa. Tinye mgbakwunye metrik na nke ọ bụla ga-egosipụta ihe ịga nke ọma nke nkenye ọnọdụ. Ihe omuma ndi ozo gunyere:
Ihe data choro
Ndị mmadụ chọrọ
Usoro nkwado / usoro mmefu ego
E wezụga nke ahụ, dị njikere ịza ajụjụ na njedebe nke okwu gị, dị ka:
Kedu ka CDP si dabaa na azịza azịza anyị dị ugbu a? O doro anya, CDP ga-arụ ọrụ dị ka ebe na-ejikwa amamihe hazie ozi sitere na silos anyị niile.
Ndi CDP siri ike ichikota na ihe omuma ndi ozo? Otutu CDP nwere ike ijiko ya na ntinye aka ole na ole.
Kedu ka ị ga - esi jide n'aka na ndị CDP nọ ebe a iji nọrọ? Ọtụtụ ndị ọkachamara na-atụle CDP n'ọdịnihu nke ahịa.
Na-achịkọta ya niile-mepụtara ọhụụ iji kwadobe echi
Kedu ụzọ kachasị mma iji chịkọta ihe dị mkpa CDP nwere maka nzukọ gị? Isi ihe bụ ilekwasị anya n'echiche bụ na CDP abụghị naanị ịchekwa data ndị ahịa, ọ na-enye uru site na ijikọ data sitere na silos dị iche iche iji mepụta profaịlụ ndị ahịa ọ bụla dabere na omume oge. Mgbe ahụ, ọ na - eji nkuzi igwe maka nghọta dị mkpa enwere ike iji ghọta ihe ndị ahịa jiri ụnyaahụ, ihe ha chọrọ taa, na ihe ha ga - atụ anya ga - echi. E wezụga nke ahụ, CDP nwere ike iwepu mmefu metụtara data, akụ nke ụlọ ọrụ si-silo, ma nweta ọtụtụ ebumnuche dị oke mkpa. Na mmechi, CDP ga - enyere nzukọ gị aka iji data ya rụọ ọrụ nke ọma, na - enye aka na arụpụta ọrụ ka mma, arụmọrụ arụmọrụ, yana uto dị iche iche – niile dị mkpa maka ịba uru n'agbanyeghị agbanyeghị akụ na ụba.
Tags: cdpAhịa Data Platformotúezigịnị kpatara cdp
Tom Treanor bụ onye isi ahịa ahịa na Treasure Data, ebe ọ na-eme ka mmata maka ngwa ahịa ụlọ ọrụ CDP (usoro data ndị ahịa). Tom nwetara MBA na Wharton School of Business, yana Master of Arts na International Studies na Mahadum Pennsylvania.
Etu ị ga-esi sụgharịa Nsụgharị Mgbasa Ozi Gị iji rite uru na Ecommerce Ọganihu